Udidi: Ipolka dot
I-Polkadot (DOT) Ifikelela kwi-$ 33 yenkxaso njenge-Altcoin Rebounds
26 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 26 Novemba 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 60, $ 62, $ 64
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 40, $ 38, iirandi ezingama-36
IPolkadot (DOT) Ixabiso leXesha elide: Ukuthwala
IPolkadot's (DOT) ixabiso lawela ezantsi $33.60 waza watsala umva. I-cryptocurrency inzulu kakhulu kwindawo ethengiswa kakhulu. I-Polkadot ivavanya inqanaba lexabiso lembali ngo-Oktobha 11. Namhlanje, isenzo sexabiso sibonisa umsila omde wekhandlela. Umsila wekhandlela omude ubonisa ukuba inkxaso ye-33 yeedola yingcinezelo eqinile yokuthenga. I-altcoin kulindeleke ukuba iphakame ngaphezu kwenkxaso yangoku.
I-DOT / USD-Itshathi yemihla ngemihla
I-Polkadot ikwinqanaba le-36 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ixabiso le-DOT lisekwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Isondela kummandla ogqithisiweyo. Amaxabiso e-crypto angaphantsi komgca weentsuku ezingama-21 kunye nomgca weentsuku ezingama-50 ezihambayo ezibonisa ukuhla.
IPolkadot (DOT) yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukuthwala
I-DOT/USD isekwintshukumo ehlayo. Ixabiso le-DOT liwele phantsi kwe-34 yeedola kwaye lihlehliselwe umva. Okwangoku, ngoNovemba 17 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 32.82.
I-DOT / USD-4 iyure
Ixabiso le-DOT lingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-altcoin ithengisa kummandla ogqithisiweyo. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
Umbono gabalala wePolkadot (DOT)
I-Polkadot's (DOT) ifikelele kwi-bearish exhausation ngenxa yesalathiso somsila omde wekhandlela. Kwakhona, kukho ukugatywa kwexabiso ngaphezu kwenkxaso ye-$ 34. Inkxaso ye-$ 34 yindawo yokuthenga enamandla.
tags IDOT, IDOTI / iUSD, Ipolka dot, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-Polkadot (i-DOT) ikwi-New Uptrend, i-Breaks ngaphezulu kwe-$ 40 yokuchasana
19 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 19 Novemba 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 60, i-$ 62, i-$ 64
IPolkadot's (DOT) ixabiso liqhawuke ngezantsi umndilili ezihambayo ukufikelela ephantsi $37.80. Namhlanje, ixabiso le-DOT liye lanyuka ngaphezu kwenkxaso yangoku njengoko imarike iphinda iqhubele phambili ukunyuka. Ukuba abathengi batyhala i-altcoin ngaphezulu kwe-avareji ehambayo, i-Polkadot iya kuba ngaphandle kokulungiswa okuhla. I-crypto iya kuphinda iqalise ukunyusa ukuvavanya kwakhona ukuphakama kwangaphambili. Okwangoku, i-altcoin inyuke yaya phezulu kwi-$ 41 ngexesha lokubhala.
I-Polkadot iye yawa kwinqanaba le-47 ye-Relative Strength Index ixesha 14. I-crypto isekho kwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Amaxabiso e-crypto angaphantsi komgca weentsuku ze-21 kunye nomgca weentsuku ezingama-50 ezihambayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-altcoin isendleleni ehlayo. Ixabiso le-DOT liwele phantsi kwe-37 yeedola kwaye liphinde laqala phezulu. Okwangoku, ngoNovemba 6 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kuwela kwinqanaba le-2.618 Izandiso zeFibonacci okanye i-$ 39.50. Imakethi ivavanye inqanaba leFibonacci kwaye yaphinda yaphinda yanyuka ngoku.
Ixabiso le-DOT lingaphezulu kwe-40% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi iphinde yaqala ukunyuselwa ngamandla. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-Polkadot's (DOT) iqalile ukuqaliswa kwakhona kwe-uptrend. I-DOT / i-USD iphule ngaphezu komgca we-21 weentsuku ezihambayo ezihambayo kwixesha elisezantsi. Ikhefu ngaphezu kwee-avareji ezihambayo ziya kuqhubela phambili i-crypto ukuba iphakame.
I-Polkadot (i-DOT) iphinda ibuyele ngaphezulu kwe-$ 44, i-Poises ye-Upper Move Kungekudala
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 40, $ 38, $ 36
Polkadot (DOT) Ixabiso Ixesha elide Trend: Bullish
Ukususela ngoNovemba 8, IPolkadot's (DOT) ixabiso iye intshukumo ezantsi. Namhlanje, imarike isondela kwi-10 kaNovemba ephantsi kwe-$ 42. Nge-4 kaNovemba, abathengi ngaphambili batyhalele ixabiso le-DOT ukuya phezulu kwi-55 yeedola kodwa abakwazanga ukugcina isantya se-bullish. Emva kwemizamo emithathu yokugcina ixabiso elingaphezulu kwe-$ 55 phezulu, iinkunzi zenkomo zaxoshwa ngamabhere. Namhlanje, ixabiso le-DOT liwele phantsi kwe-$ 45.18 ukusuka phezulu kwi-$ 55. I-downtrend inokufikelela kwi-low yangaphambili ye-42 yeedola.
I-Polkadot iye yawa kwinqanaba le-48 le-Relative Strength Index ixesha le-14. I-crypto yayingaphambili kummandla ogqithisiweyo njengoko abathengisi bavela ukutyhala amaxabiso ezantsi. I-altcoin ikwi-bearish trend zone kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso le-crypto liyawa kodwa lingaphantsi komgca we-21 weentsuku ezihambayo kunye nangaphezulu kwe-avareji yeentsuku ze-50.
IPolkadot (DOT) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-altcoin isendleleni ehlayo. I-cryptocurrency iye yaphuka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo ukufikelela ezantsi kwe-42.50 yeedola. Okwangoku, ngoNovemba 6 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kuwela kwinqanaba le-2.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 39.35.
I-crypto ingaphantsi kwe-50% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. I-Polkadot ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
Ukuhla kwe-Polkadot's (DOT) kufikelele ekudinweni kwe-bearish. Umsila omde wekhandlela ukhomba kwinkxaso ye-$ 42.50. Oku kubonisa ukuba i-altcoin inexinzelelo olunamandla lokuthenga ngaphezu kwenkxaso ye-$ 42.
Phawula: I-Learn2Trade.com ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali
I-Polkadot (i-DOT) iyancipha ukuya kwi-Downside, ijongene nokuGatywa kwi-$ 55
5 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 5 Novemba 2021
IPolkadot (DOT) Ixabiso leXesha elide leXesha: Bullish
IPolkadot's (DOT) ixabiso kwi intshukumo ezantsi emva kokukhatywa yayo ukusuka phezulu $55. Ixabiso elitsha lencopho liphunyeziwe emva kokuphinda kuphindaphindwe ngaphezulu komyinge weentsuku ezingama-21. I-rebound iphula inqanaba lokumelana ne-$ 46. Ukuchasana kwe-$ 46 kuye kwathintela ukuhamba kwexabiso kwiiveki ezimbini. Ixabiso le-DOT lidibene ne-$ 55 ephezulu. Ukubuyiselwa kwangoku kubangelwa yimeko ethengwe ngokugqithisileyo ye-cryptocurrency. Ukuhla kwangoku kuya kwandisa kwi-$ 49 ephantsi okanye inqanaba lokuqhawula i-$ 46. Ukunyuka kwe-bullish kuya kuphinda kuqalise ukuba ixabiso lifumana inkxaso ngaphezu kwe-$ 46 okanye i-$ 49 yezinga lexabiso.
I-altcoin ifikelele kwingingqi ethengisiweyo kodwa iye yawa kwinqanaba le-66 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ixabiso le-DOT likwindawo ye-bullish yendawo kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu.
Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-2, i-altcoin isendleleni ezantsi. I-crypto iyawa emva kokugatywa kwi-55 yeedola. Okwangoku, ngoNovemba 4 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kuwela kwinqanaba le-2.0 Izandiso zeFibonacci okanye i-$ 49.77.
I-DOT / USD-2 iyure Itshathi
Isalathisi seeyure ezingama-2 Ukufunda
Okwangoku, imarike ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwestochastic yemihla ngemihla. Iwile kummandla othengisiweyo. Kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lufikelela ekuphelelweni kwe-bearish. Imarike ikwimo ye-bearish. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
Ixabiso lePolkadot's (DOT) likwinyathelo elihlayo. Ibuyele kwixabiso eliphezulu le-$55 ukuya kwi-$52. Kunokwenzeka ukuba iphinde iqale phezulu njengoko i-altcoin iwela kwindawo ethengisiweyo yemarike.
Polkadot (DOT) Ubambe ngaphezu $40, May Resume Uptrend
29 October 2021 | Ukuhlaziywa: 29 October 2021
namhlanje, IPolkadot's (DOT) ixabiso lirhweba ngaphezu kwe-avareji ezihambayo. Abathengi batyhalela i-altcoin ukuya phezulu kwi-45.76 yeedola kodwa baxhatshazwa kwizinga eliphezulu lakutshanje. I-cryptocurrency yawela kwinkxaso engaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-21. Ngexesha elifanayo, i-altcoin iphinde yaqala phezulu ngaphezu kwenkxaso yangoku. I-Polkadot iya kuqalisa phezulu ukuba i-SMA yeentsuku ezingama-21 okanye inkxaso ye-38 yeedola ibambe. I-altcoin iya kuncipha ukuba inkxaso yangoku iphulwa.
I-Polkadot ikwinqanaba le-55 le-Relative Strength Index ixesha le-14. I-altcoin irhweba kwindawo ye-bullish ye-bullish, ngoko ke kukho ithuba lokuqhubela phambili phezulu kwengqekembe. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zisathambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Okwangoku, imarike ingaphantsi kwama-80% uluhlu lwestochastic yemihla ngemihla.
Kwitshathi yeeyure ezi-3, i-altcoin iphinda iqalise i-uptrend entsha. I-uptrend ithintelwe yi-21-day SMA kunye ne-50-day SMA. I-uptrend iya kuqhubeka xa ixabiso liqhekeza ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. Okwangoku, ngo-Oktobha 28 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-61.8% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kunyuka kwinqanaba le-1.618 Izandiso zeFibonacci okanye i-$ 45.02.
I-DOT / USD-3 iyure
Isalathisi seeyure ezingama-3 Ukufunda
I-DOT ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
Ixabiso lePolkadot's (DOT) lisengaphezulu kwemiyinge ehambayo. Kukho ithuba lokunyuka kwe-cryptocurrency. Ixabiso le-DOT liya kuba nentshukumo ekhawulezileyo ukuba ixabiso liyaphuka ngaphezu kwemiyinge ehambayo.
I-Polkadot (DOT) iNqa kwi-Downsides, ayikwazi ukuZinzisa ngaphezu kwe-$45 ephezulu
22 October 2021 | Ukuhlaziywa: 22 October 2021
Inqanaba lokumelana eliphambilis: $ 60, $ 62, $ 64
namhlanje, IPolkadot's (DOT) Ixabiso belisokola ukugcina ngaphezulu kwe- $ 45 ephezulu. Abathengi baye benza iinzame ezimbini zokuqhawula ngaphezulu komgangatho wamva nje. Kwimizamo yokuqala, i-Polkadot yachaswa njengoko yawela kwi-44.90 yenkxaso. Nangona kunjalo, emva kovavanyo lwesibini, i-altcoin yehla ngaphezu kwenkxaso ye-45 yeedola. Intshukumo yexabiso langoku ihleli injalo ukusukela nge-Okthobha ye-20.I-cryptocurrency iya kuhlangana ukuya kwi-50 yeedola ephezulu ukuba iinkunzi zenkomo ziphumelele ngaphezulu kweziphezulu zamva nje. Nangona kunjalo, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukugcina amandla akhulayo, ixabiso le-DOT liza kwehla liye kwi-34 yeedola ezisezantsi.
I-Polkadot ikwinqanaba le-68 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Imarike ikufuphi nommandla othengiwe ngokugqithisileyo. I-DOT / i-USD ayinayo indawo eyaneleyo yokwenza i-rally kwi-upside. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
Polkadot (DOT) Ixesha eliphakathi Trend: Bullish
I-altcoin iye yanzima ukugcina ngaphezu kwe-$ 45 inkxaso. I-cryptocurrency iya kuphinda iqhubele phambili ukuya phezulu ukuba isantya se-bullish sangoku sizinzileyo. Namhlanje, ukunyuka okunyukayo kuye kwarhoxiswa. Okwangoku, ngo-Oktobha 22 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-61.8% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kunyuka kwinqanaba le-1.618 Izandiso zeFibonacci okanye i-$ 47.11.
I-DOT/USD – 30 Mins Tshati
I-DOT ingaphantsi kwe-40% yoluhlu lwestochastic yemihla ngemihla kodwa i-stochastic bands ihla inyuka. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka. IPolkadot ine-crossover ye-bullish njengoko iintsuku ezingama-21 ze-SMA ziwela ngaphezulu kwe-50-day SMA.
Ixabiso lePolkadot's (DOT) likwinyathelo eliya phezulu. Amathuba okunyuka akhona nje ukuba imivalo yexabiso ingaphezulu kwemiyinge ehambayo. Abathengi kufuneka baphule i-$ 46 yendawo yokumelana ukuze baphinde baqhubele phambili ukunyuka.
IPolkadot (DOT) idibanisa ngaphezulu kweedola ezingama-40 phakathi kokulindelwa kweBullish
15 October 2021 | Ukuhlaziywa: 15 October 2021
namhlanje, Ixabiso lePolkadot (DOT) inyukele phezulu $ 42. I-uptrend yangoku ijongene nokuchasana kwindawo yokumelana ne- $ 44. Izolo, intengiso yenqabile kwi-40 yeedola yenkxaso. Inkxaso ye- $ 40 ibambe ngokubonakala kweziphatho zezibane. Ixabiso le-DOT liza kuphinda liqhubeke kwakhona xa inkxaso yangoku ibambe i-DOT / i-USD iya kuphinda inyukele phezulu xa uxhathiso lwangoku luphuliwe. Iimarike ziya kufumana i- $ 50 ephezulu.
I-Polkadot ikwinqanaba lama-64 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba umfutho okhoyo wangoku ufikelela kwingingqi ethengwe ngaphezulu kweemarike. Ixabiso le-DOT liya kuthengiswa ngaphezulu kwinqanaba lama-70 le-RSI yemihla ngemihla. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-altcoin iqale ngokutsha ukunyuka emva kokuhla ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 36. Ukunyuka okwangoku kufikelele kwi-42.42 ephezulu yeedola kodwa kwagxothwa. Ngeli xesha, ngo-Okthobha 13 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-DOT iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye i- $ 50.59.
I-DOT ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Nangona kunjalo, imitya ye-stochastic ithambekele phezulu ibonisa ukunyuka okuphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
Ixabiso lePolkadot (DOT) kukunyuka okuphezulu. I-altcoin iyarhweba kwindawo yokuqhubela phambili. Kukho ukubakho kokuhamba okungaphezulu kokunyuka kwe-crypto. Ikhefu elingaphezulu kwe- $ 44 yokuxhathisa iya kwenza ukuba ingqekembe iye kwi-50 yeedola ephezulu.
I-Polkadot (DOT) ihamba phambili, ikhefu ngaphezulu kwe-32 ephezulu
2 October 2021 | Ukuhlaziywa: 2 October 2021
Ixabiso leDOT Ibuyiselwe ngaphezulu kwe- $ 26.50 njengexabiso lokuqhekeka ngaphezulu komndilili wokuhamba. Ukunyuka kuya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso aphelile kwaye avala ngaphezulu kwemilinganiselo ehambayo. Ixabiso le-altcoin liza kuphakama ukuphinda utyelele i-34 ephezulu kunye ne- $ 38 ukuba i-uptrend yangoku iqhubeka. Nangona kunjalo, ukuba intshukumo yangoku ye-bullish ijongene nokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje, i-altcoin iya kuwela kumda oboshwe kuluhlu. Ixabiso le-DOT liza kutshintsha phakathi kweentsuku ezingama-21 ze-SMA kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50.
I-DOT / USD -Itshathi yansuku zonke
Ixabiso le-DOT likwinqanaba lama-53 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba imakethi ifikelele kwindawo ephezulu kwaye iyakwazi ukunyuka ngaphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
Kwitshathi yeyure ye -4, i-altcoin yenza intshukumo ephezulu. Imakethi isondela kwingingqi ethengiweyo yentengiso. Ngeli xesha, ngo-Okthobha 1 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOT iya kuwa kwinqanaba le-1.272 ukongezwa kweFibonacci.
DOT / USD -1 Iyure
Ixabiso le-DOT lingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengwe ngaphezulu. Abathengisi baya kuvela kwindawo ethe kratya yentengiso. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Ixabiso lePolkadot (DOT) kukunyuka okuphezulu. Ixabiso le-DOT liphuliwe ngaphezulu komndilili wokuhamba. Ukuba umfutho wokukhula uzinzile, intengiso iya kuqhubeka inyuka.
Phawula: I-Learn2Trade.com ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Akanoxanduva lweziphumo zakho zotyalo-mali
tags AD, IDOT, IDOTI / iUSD, Ipolka dot, Uhlalutyo lwamaxabiso
IPolkadot (DOT) iyehla njengoko abathengi besilele ukuxhasa ngaphezulu kwe- $ 34 ePhakamileyo
Ixabiso lePolkadot (DOT) kukuhamba phantsi. I-altcoin iyawa njengoko ijongene nokwaliwa ukusuka kwi- $ 33.60 ephezulu. Kwintshukumo yexabiso elidlulileyo, iPolkadot yayikwindawo yokuqhubela phambili enomdla njengoko yayifikelela kumda wokumelana ne- $ 34. Abathengi baphinde babuyela kwindawo yokuchasana kabini ngaphambi kokuba baphinde bagxothwe. I-crypto ngoku iyatshintsha phakathi kweentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50. Ukuba iibhere ziyaqhekeka ngaphantsi kweentsuku ezingama-50 ze-SMA, uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka kwakhona.
Ixabiso le-DOT likwinqanaba lama-52 leSalathiso soMandla esiNxulumene naMandla ixesha le-14. Ingqekembe ikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho ophakathi 50. Ukuba amaxabiso eqhekeza ngaphantsi komgca wenkxaso, uxinzelelo lokuthengisa luza kuphinda luqale.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iPolkadot lusezantsi. I-altcoin yaphule ngaphantsi kwemilinganiselo ehambayo. Oku kuyakukhawulezisa ukuhamba ezantsi. Ngeli xesha, ngoSeptemba 23 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liza kunyuka kwaye lihlehle kwinqanaba le-1.272 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-34.03. I-altcoin ayikhange ifikelele kulwandiso lweFibonacci kodwa ibuye umva kwinqanaba leedola ezingama-33.60.
I-DOT / USD-4 Itshathi yeYure
Ixabiso le-DOT lingaphantsi kwe-21-yeentsuku ze-SMA kunye ne-50-day SMA iphakamisa ukuqhubela phambili ezantsi. I-altcoin ingaphantsi kwe-80% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho.
IPolkadot kukuhla okuye ezantsi. Abathengi abanakukwazi ukugcina amandla okonyusa ngaphezulu kwe-34 yeedola. I-downtrend yangoku inokuthi ifikelele kwizantsi le- $ 26.
I-Dogecoin (DOGE) iphinda ityelele kwi-Low Low kwi- $ 0.21 njengee-Bears zisongelayo ukuba zibe mfutshane
23 Septemba 2021 | Ukuhlaziywa: 23 Septemba 2021
Ixabiso likaDogecoin (DOGE) iwile yaya kuthi ga kwi-0.20 yeedola njengoko iinkunzi zeenkomo zathenga idiphu. Izolo, abathengi batyhale ingqekembe ephezulu kwi-0.23 yeedola kodwa khange bakwazi ukuqhubeka nokukhula ngamandla. Namhlanje, ixabiso le-DOGE liyawa njengoko lijongana nokwaliwa kwindawo ephezulu ye-0.23. Iimarike kulindeleke ukuba ziwele kwaye ziphinde zisebenzise inkxaso eyi- $ 0.20. Kwicala elisezantsi, ukuba iibhere ziyaphula inkxaso yangoku, ixabiso le-DOGE liza kuwela kwi-0.18 yeedola ephantsi kwaye ibuye umva.
UDogecoin une-bearish crossover. Iintsuku ezingama-21 ze-SMA zinqumleza ngaphantsi kweentsuku ezingama-50 ze-SMA zibonisa umqondiso wokuthengisa. I-Dogecoin ikwinqanaba lama-39 le-Index ye-Relative Strength Index 14. I-crypto ikwindawo ye-downtrend kwaye inakho ukuwela kwicala elisezantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yemihla ngemihla, ixabiso le-DOGE lingaphantsi kwemilinganiselo ehambayo. Ixabiso liyehla ukophula umphantsi osezantsi okwesihlandlo sesibini. Ngeli xesha, ngoSeptemba 7 yedowntrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kuwa kodwa ibuye umva kwinqanaba 1.272 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola eli-0.18.
Iiyure ezi-4 / Izalathi zeTshathi yemihla ngemihla Ukufunda
Ixabiso le-DOGE lingaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba i-DOGE ikwi-bearish umfutho. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye ezantsi.
IDOGE / iUSD isekuhla. Ekuqaleni, uDogecoin wehla waya ezantsi kwi-0.21 yeedola njengoko iinkunzi zeenkomo zazithenga iidiphu. Ukulungiswa okuphezulu kuye kwahlala ixesha elifutshane njengeebhere eziphinda ziqwalasele ezantsi zangaphambili. Ukuba inkxaso ye- $ 0.21 yophukile kwakhona, imakethi iyakwehla iye kwi-0.18 yeedola ezisezantsi.